Muhiimada Gudi dhaqameedka soomaaliyeed ee xaliya iska-horimaadyada (STCRC) waa iney yareyso dhacdooyinka dhibaatada iyo danbiyada ka dhexdhaca Jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Colorado, iyadoo la hormarinaayo nabada iyo is rabida ama is ogolaanshaha. Jaaliyadan waa mid halis u ah, marka laga eego dhinaca farqiga hab-dhaqameedka, isbedelka xaalada dabeecada buslshada, iyagoonan aqoon u laheen sharciyada magaalada iyo degmada iyo madax-wareerka iyo weliba jahwareerka kaga imaanaya dhinaca waaxda socdaalka ama hijrada. STCRC waxey hoolgeliyaan tiknikooyin la cadeeyey iyagoo isku keenaayo ficil qabashada hab-dhaqameedka ee (xeer soomaali) iyagoo wata qorsho wada shaqeyn ka dhaxeynaayo awooda sharci ilaalinta ee magaalada.
Gudiga waxey ka kooban yihiin tiro kinsi oo shan odoyaal ah, iyo weliba in la balaarin doono hadii ay noqoto lagama maarmaan. Xubnaha gudiga waa iney noqdaan odayaal dhex-dhexaad ka ah jaaliyada cilmina u leh dhaqanka Soomaaliyeed, qibradna u leh xalinta iska-hor imaadyada iyo xushmadna lu leh jaaliyada dhexdeeda. Odayaasha waxey dhexdehxaadiyaan shaqsi, qoys iyo murunada bulshada. Xaaladaha qatarta ah, waxey la shaqeynayaan hay’adaha sharci ilaalinta iyagoo cadeynaya dhibanayaasha danbiga loo geystay iyo danbi-geystaha. STCRC waa iney awood u leeyihiin iney xoog-saarida natiijooyinka dhex-dhexaadinta iyagoonan ku xad-gudbeynin xeer ama sharci.
Waxtarka wanaaga bulshada Soomaaliyeed ee Colorado waa la kordhin doonaa dhinaca nabada iyo qaraabeynta jaaliyada dhexdeeda iyadoo hadana la yareynaayo buuqa dhibaatada iyo xadgudka sharciga. Tani xitaa waxey xoojineysaa awooda gudiga STCRC iney u howl qabtaan jaaliyada iyagoo u dhisaya xiriir cusub ee la yeelanayaan hay’adaha sharci ilaalinta ee Denver iyo nawaaxigeeda iyo iyagoo kordhin doona Rugta Jaaliyada Soomaaliyeed ee Colorado (SCCC) muuqaalkeeda guud ahaaneed, iyadoo adkeyneysa doorkeeda ay ka ciyaarto jaaliyada Soomaaliyeed dhexdeeda.
Shaqsiyaadka hoos ku qoran waa gudiga loo xulay iney xaliyaan iska horimaadyada, waxey heystaan ogolaansho buuxda ay go’aano ka qaadan karaan iyagoo matalaaya jaaliyada soomaaliyeed ee Colorado markii ama inta ay socoto muran kasta ama dhexdhexaadin iska horimaad. Waxey kaloo ay yihiin isku xirka jaaliyada Soomaaliyeed dhinaca sharciga iyo arimaha quseeya dib-uhishiisiinta dhaqanka.
Magacyada gudi dhaqameedka xalinta iska horimaadyada (STCRC )